MUCAARADKU MAXAY RABAAN? – Balcad.com Teyteyleey
Maalmahaan waxaa soo kordhay xildhibaano lagu tilmaamay qaswadayaan oo xaruntoodu tahay Nairobi, tiro ahaana lagu qiyaasay ilaa boqol ruux oo ku dhawaaqay urur cusub laguna magacaabay HORUSOCOD…marka runta loo noqdo waxaa caddaatay inay yihiin DIB-U-SOCOD isu habar-wacday inay soo abaabulaan duullaan ku socda dowladda curdunka ah ee aan weli caga isku taagin. Haddaba, waa maxaay danaha ay leeyihiin? Maxaa ku kallifay inay Nairobi saldhig ka dhigtaan?
Danaha ay leeyihiin si caddan ah uma sheegi karaan waayoo waxay ogyihiin inaysan waxba ku heli karin nidaamka ay ku socdaan. Dadka qaar waxay qabaan in kooxdaani ay arkeen lacago fara badan ee ku soo shubmaaya khasnadaha iyo jeebabka masu’uuliinta dowladda qaarkood, taasoo ku abuurtay damac iyo inay hanti badan meesha ka helaan.Waxaa la moodaa inay ka khaldan tahay wasiiladi ama tabihi ay u adeegsan lahaayeen ka mira dhalinta hamigaan oo ah inay fara qabsi fiican ka helaan kaddibna iskaga dhaqaaqaan, sidi lagu yaqiin qurbajoogta.
SABABAHA DHALIYAY QASWADAYAASHA
Waxaa hubaal ah inaysan QASWADAYAASHU u socon dano dadweyne, balse hamigoodu yahay jagooyin iyo hanti aad u fara badan oo aamusi karta iyaga oo dhan ama qaarkood. Sababaha keenay inay soo baxdo kooxdan waxay salka ku heysaa oo si toos ah loola xariiri karaa hab-dhaqanka shaqaalaha ku sugan labada xafiis ee Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha oo si loogu gudbo madaxda ay aad u adag tahay, waana dad badankooda dibadaha laga keenay oon aqoon ku filan u lahayn sida loola macaamilo dadka tirada badan ee doonaya inay arkaan ama la kulmaan Madaxweynaha iyo R/Wasaarah midkood.
Dhibaatada ugu weyn ee nagu soo socota waxay tahay in tiro aad u badan oo ka yimid qurbaha una badan dhallinyaro inay maamulki iyo howlihi dalka boqolkiba 85% la wareegeen ama loo xilsaaray iyagoon wax khibrad shaqo ah ama aqoon akadeemi ku saleysan midna aan lahayn…taasina waxay horseeday inay howlihi dowladda oo dhan isku dhex yaacaan oo la kala garan waayo howlaha sida loo kala leeyahay. Dadkii khibrada u lahaa shaqooyinka oo wasaaradaha maamulkooda gacanta ku hayay muddo dheer ayaa, sida muuqata, lagu beddelay dad aan weligood meelna ka soo shaqeyn kana arradan aqoon ku filanna u lahayn sida ay howluhu u kala socdaan.
Balaan dib u Searching for a cost effective solution to buy your Cozaar? You can get it for as much as 1.09 right now! fiirino wasaaridihi dalka soo maray tan iyo gobannimadi, sidi tii WAXBARASHADA oo ay gacanta ku hayeen koox is xulatay oo isku bahaysatay jufo gaar ah oo howlihi wasaaraddaas oo dhan hantiyay kana ilaaliyay inay wax jago ah ama darajo ka qabtaan cid aan ahayn jufadooda. Qarkood markey xataa gaareen darajo Wasiir marki laga qaaday jagadi dib ugu soo laabtay shaqadi WASSARADA…wax lala yaabo!!! Waxaan filayaa in qaarkood weli nool yihiin!!!
Arrinta ugu weyn ee QASWADAYAASHAN ku dhiiri geliyay inay gadoodaan, waxay ila tahay, markey arkeen dad ay u heystaan inay iyagu ka mudan yihiin kana howlkarsan yihiin, loo magacaabay jagooyin waxayna taasi ku dhalisay inay dib la isu-aruursado oo tiro ahaan wax lagu raadiyo, wixi ay noqdaan, wuxuuna hamigooday weyn yahay inay ama jagooyin helaan ama lacagO laaluush ah…waxay adeegsanayaan nadariyad ah QAYLSHAA MA QADO.
Bal aan dhinaca kale u weecano..Cabdiweli Gaas waa ninki yiri haddii ay Xamar dunto annaga waa jireynaa. Ninki ku tilmaama Gaas aqoonyahan waa qof u gefay aqoonta oo meel uga dahacay, waayoo qof aqoon u saxiib ah wuxuu garan lahaa inay Somaliya federaal tahay oo dalka oo dhan laga xakumo Xamar. Waryaa u sheega in magaca uu sito ee Madaxweyne aan mar dambe loogu weceyn hadduu Xamar dumo waayoo waa cagihii uu dalku ku taagnaa!!!
C/Weli Gaas waxaa indha tiray cadaawo qabiil ku saleysan uusan marna ka gaboobeyn meel kasta uu gaaro iyo jago kasta oo qabto…waa nasiib darro inteeda la’eg.
Madaxweyne Faarmajo iyo R/Wasaare Kheyre waxyaabo badan ayaa ka khaldan, laakin waxay xaq noogu leeyihiin inaan siino waqti ay wax ku kala guraan waxyaabahan isku milmay oo ka weyn awoodooda. Muddada gaaban hadda la soo maray marna kuma filna in lagu saxo khaladaadki dalka ka jiray iyaga hortood iyo kuwi abuurmay markey talada qabteen. Intaa waxaa u dheer cadaw tiro badan oo duulaan nagu ah, waxaana u baahanahay inaan kala garanno waa kee saaxiibka dhabta ah.
QASWADAYAASHI markey arkeen radi-ficilki ka dhashay tallaabadooda oo uu u gudbiyay ninki ay sahanka u soo direen ayey dib isugu laabteen markaasey dheheen waxaan sameyneynaa XISBI SIYAASAD ee ma nihin mucaarad..Haddaba, maxaa keenay in xisbi Somali loo sameynaayo lagu aasaaso Nairobi? Haddi wax la qarihaayo aysan jirin maxaa loo geeyay Nairobi oo meel Somaliyaka mida loogu aasaasi waayay? Taas waa idinka diidnay ee tu kale keena!!! Waxaa jirta xikmad dheheysa CAWEYS HADDAAN WAX KALE LOOLA JEEDIN MAXAA HABEEN LOO CAYAARAA..
Haddaba, ku dhawaaqa oo qirta inadad fashilanteen oo jagada aad heysiin aadan marna u qalmina!!!